6 ndọtị ọhụụ izizi na Foto maka macOS High Sierra | Esi m mac
Ebe ọ bụ na nsụgharị ndị gara aga nke macOS, ndị editọ foto nwere ike itinye nsụgharị na-ebelata na ndọtị Foto maka ngalaba Mac. Nke ahụ bụ, site na interface Foto Apple, anyị nwere ike itinye ụdị ọ bụla nke retouch ma ọ bụ nza nke anyị nwere na nchịkọta akụkọ foto. maka ya. Ọ bụ eziokwu na ndọtị maka Foto na-abịarute na tụlee, mana nsụgharị ikpeazụ nke macOS High Sierra, na-abịa na njirimara ole na ole ọhụrụ. Anyị ga-ahụ 4 n’ime ha: WhiteWall, Foto Mimeo, GoodTimes, Mpix Photo Mbipụta, Shutterstock na Wix.
Nke mbụ n'ime ha, mgbidi ọcha, na-enye anyị ohere imecha foto anyị dị ka a ga-akwụnye ya n’elu mgbidi ma ọ bụ n’ahụ́ ájá. Ọ na-enye anyị ohere ịhọrọ ụdị nke okpokolo agba na montages foto, ma ọ bụ mechaa otu foto n'akụkụ ọzọ.
Iji ike nke Foto Apple, WhiteWall na-enye gị ohere ịlele ihe oyiyi gị na-agbanye na mgbidi gị. Hazie gị onwe gị template nke foto Mbipụta si a nhọrọ nke ọkacha mmasị gị oyiyi. Nke mbu, kpebie ma ichoro mbipụta, mbipute etinyere, ma obu mbiputa ederede.
Mgbe ahụ gbanwee ihe oyiyi, degharịa ha na mgbidi ahụ mebere, gbanwee nha ha ma kụọ ha ka ịchọrọ. Ozugbo ahọpụtara ihe onyonyo na ndokwa ịchọrọ, ịnwere ike ime mgbanwe na nhọrọ ntinye ma ọ bụ ịhazi ị họrọ. Nwere okpokolo agba ọdịnala, ị nwedịrị ike ịhọrọ ma hazie ute iji kwado foto gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile ọ na - ewe bụ ịpị aka ole na ole na ncheta gị ga - aga WhiteWall maka mmepụta mmeri.
Can nwere ike ibudata Whitewall, site na Applelọ Ahịa Apple Apple.
Ngwa nke abuo bu Foto Mimeo. Ọ bụ ihe ọzọ na Foto maka Mac tinye-ons na-eme kalenda, kaadị ma ọ bụ ọba. Ozugbo ịmechara, ịnwere ike ịtụ ọrụ ahụ site na ụlọ nyocha foto ozugbo.
Foto Mimeo bụ ndọtị ọhụrụ dị ike maka ịmepụta foto, kaadị, na kalenda n'ime Foto maka macOS High Sierra.
Mgbe ị wụnye ngwa site na Mac App Store, malite site na ịga na My Projects na ịhọrọ Mimeo Foto site na menu ndọpụta. Ugbu a ị nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ngwaahịa obibi akwụkwọ adịchaghị.
Foto Mimeo na-enye ọtụtụ isiokwu maka oge ọ bụla. Họrọ nke zuru oke maka ọrụ gị, ma ọ bụ bido na ncha.
Download Foto Mimeo kpọmkwem site na Mac Apple Store.
A na-akpọ ndọtị nke atọ Oge oma. Mee collages nke oke mma na nkenke nke onyonyo. Anyị na-ekwu maka ngwa a na-emelite mgbe niile, yabụ ozi ọma na-aga n'ihu.
Jiri ihe oma mee ihe. Ruo mgbe i jiri GoodTimes ị nweghị ike iche n'echiche mmetụta snapshots dị mfe nwere ike inwe. Agbanyeghị, GoodTimes bụ ngwa dị egwu dị egwu: itinye uche n'ihe ogologo, imewe 3D dabara adaba ozugbo, nsonaazụ ya na okpokolo agba ya, nhazi ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, jụọ ndị ahịa anyị ọkachamara.
Oge oma Ọ na-ọnụ na € 21,99 na Mac App Store.
A na-akpọ ngwa nke anọ Mpix Photo Mbipụta.
Ọ bụ ngwa na-enye anyị ohere ịhụ mmetụta nke foto anyị na acrylic, etiti osisi, nke nwere ọla n'akụkụ, yana ọtụtụ ntọala ndị ọzọ. Ozugbo arụchara ọrụ ahụ, a na-eziga ya na laabu ka ịnata ya n’ime awa ole na ole.
Anyị nwere ike ibudata Mpix Photo Mbipụta, na na Mac App Store
Anyị na-aga na ndọtị nke ise, nke a na-akpọ Shutterfly. A na-akpọ ndọtị foto maka macOS Okponkwo Na ya, anyị nwere ike ịme foto foto na nkeji nkeji. Ruo foto 200 ị nwere ike itinye na ọrụ ọ bụla.
Mfe gbanwee foto gị ka ọ bụrụ akwụkwọ foto mara mma na nkeji. Akwụkwọ Shutterfly Photo bụ Foto maka mgbatị macOS nke na-enye gị ohere ịhọrọ foto, ncheta, ma ọ bụ ọba wee tinye ha na akwụkwọ foto. Nwere ike ịhọrọ site n'ụdị dị iche iche, aghụghọ, na nhazi iji mee ka ọ bụrụ etu ị chọrọ.
Nwere ike ibudata ngwa Shutterstock maka n'efu.
Nke isii na nke ikpeazụ ndọtị, na-enweta aha Wix. Yiri Mimeo Foto, ọ na - enye gị ohere ịmepụta ọba foto na ọtụtụ ụdị. Ngwa a na - agbakwunye ọrụ iji kesaa ọrụ anyị na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ zigara ya ndị ezinụlọ na ndị enyi.
Mepụta ọmarịcha foto ntanetị n'ịntanetị ozugbo site na foto ọba foto gị na Mac album ọ bụla dị mfe ịhazi ka ị wee hụ ya n'ụzọ ịchọrọ. Ọ bụkwa n'efu.
Can nwere ike mfe eziga gị egwu online foto album ka ezinụlọ na ndị enyi dị ka a na-akọrọ njikọ.
Wix, dị n'aka gị n'ihe ndị a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 6 mbido ndọtị ọhụrụ na Photos maka macOS High Sierra
Ebudatara m ngwa foto Mimeo ma agbalịrị m ịme kalenda mana ọ bụ na Bekee. Apụghị m ịhụ ụzọ iji tọghata ya Catalan dị ka ọ nwere ike mere tupu na Photos ngwa na Mac.
Enwere m olileanya na ozi
Ihe mbụ beta nke tvOS 11.1 dị maka ndị mmepe